ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းပြောပြ တဲ့ အူဝဲ ရဲ့သတင်း အမှန် – Shwe Yoe
ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းပြောပြ တဲ့ အူဝဲ ရဲ့သတင်း အမှန်
ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းဆိုသူကတော့ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေကိုဦးဆောင်ရိုက်ကူးနေကြတဲ့မြန်မာပြည်မှာထိပ်တန်းအောင်မြင်နေတဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်. မောင်မျိုးမင်းကတော့တက်သစ်စ မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုလည်း မြေတောင်မြှောက်ပေးပြီး လူငယ်တွေကိုလည်း လက်တွဲခေါ်ယူ
နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မောင်မျိုးမင်းကတော့ ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့ဆရာတစ်ဦးလည်းဖြစ်သလို မောင်နှမသားချင်းလိုဆက်သွယ်ကြတဲ့အနုပညာမောင်နှမတွေလို့ ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်. လက်ရှိမှာတော့ အူဝဲတို့ဇနီးမောင်နှံက အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် အနုပညာရှင်တော်တော်များများလည်း‌ ထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာနဲ့လွှတ်လာရမလားလို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အူဝဲတို့လင်မယားကတော့ မလွှတ်လာသေးတာကြောင့် ပြည်သူပရိသတ်တွေက စိတ်မကောင်းဖြစ်
နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း အူဝဲနဲ့ပက်သက်ပြီး သတင်းမှားတစ်ခုကတော့ပျံနှံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာသေဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် ပြည်သူပရိသတ်တွေက စိတ်ပူနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း မောင်မျိုးမင်းက “အူဝဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ မဟုတ်တာတွေမပြောပါနဲ့ “သူ့ရဲ့ လူ
မူကွန်ယက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ကျန်းမာကောင်းမွန်ကြောင်းလည်းကြားသိရပါတယ်။ ဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်မျိုးမင်းရေးသားထားတဲ့ ပို့စ်အောက်မှာတော့ ဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း ပြန်လည်ရေးသားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အူဝဲတို့ကိုချစ်ကြတဲ့ Cele
World ပရိသတ်ကြီးလည်း အူဝဲနဲ့အတူ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အနုပညာမောင်နှမတွေကျန်းမာစေဖို့ ဆုတောင်းစကားလေးတစ်ခုခုလောက်ရေးပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်..
Source: Maung Myo Min
မြင်ရသူ ပုရိသတွေရဲ့ အသည်း ကို အုံကြွလှုပ်ခါသွားစေခဲ့တဲ့ နန်းမွေ့စံ
ခန္ဓာကိုယ် အချိုး အစား လှပအောင် လေ့ကျင်ခန်းလုပ်နေတာကို ချပြလိုက်တဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာ(ရုပ်သံ)
လိမ္မော်ရောင် ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အရမ်းကို ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ သွန်းဆက် ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ